विप्लवलाई खुलापत्र : जवाफ छ तपाईसँग ? - Dainik Nepal
विप्लवलाई खुलापत्र : जवाफ छ तपाईसँग ?
दीपक गौतम २०७६ साउन १५ गते १४:५५
मिस्टर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव,
तपाईले बनेपामा बम पडकाउदै गर्दा, नुवाकोटको सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउँदै गर्दा अनि मोरङमा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै ट्रकमाथि आगजनी गर्दै गर्दा म गुगलमा तपाईको विगत हेर्दैछु ।
तपाईले २०५२ देखि २०६२ सम्म जुन युद्ध गर्नु भएको थियो नि त्यसका उपलब्धीहरु खोज्दैछु । ६१ सालको पेरोफेरेमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबीच सम्झौता हुँदा तपाई पनि त्यही पार्टीमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन ?
तपाईका तत्कालीन सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा तपाई निदाउनु भएको त थिएन होला नि ? अनि, विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक मैदानमा तपाई पनि सँगै आउनु भएको होइन र ?
मलाई थाह भएसम्म तपाईले पनि अनि बैद्य ‘बा’ले पनि र डाक्टर सा’बले पनि युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक धरातलमा जाने कुरा स्वीकारेर जंगलबाट काठमाडौँ छिर्नु भएको हो ।
तपाईका नेताहरुसँग आपसी कुरा मिलेन भनेर पार्टी फुटाल्ने, त्यो पनि भएन भनेर अब फेरि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने ? आतंक मच्चाउने ?
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म तपाईहरु सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईका सुप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि तपाई सँगै हुनुहुन्थ्यो । अझ, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा त मोहन बैद्यसहित तपाईहरु धोबीघाटमा बसेर छलफल गर्नु भएको हो, या भनौँ तपाईहरुकै बलमा प्रचण्डले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न बाध्य भएको मैले सम्झिरहेको छु ।
१२ बुँदे सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने, त्यसपछिको शान्ति सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने, दलीय सहमतिअनुसार भएको संविधान सभाको निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने, त्यहि संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आएको गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने, त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई स्वीकार गर्ने अनि, तपाईका नेताहरुसँग आपसी कुरा मिलेन भनेर पार्टी फुटाल्ने, त्यो पनि भएन भनेर अब फेरि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने ? आतंक मच्चाउने ?
विप्लव कमरेड मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईको असन्तुष्टी प्रचण्ड, बाबुराम र बैद्यसँग थियो नुवाकोटको वडा कार्यालय र मोरङमा गुडीरहेको ट्रकसँग होइन । न त मोबाइल कम्पनीका टावरहरुसँग हो । त्यसैले, जनतालाई धम्काउने र तर्साउने काम नगर्नुहोस । किनकी, तपाईका स्वार्थ पूर्तिका लागि जनता ढाल बन्न सक्दैनन र बनाउन मिल्दैन पनि ।
तपाईको भाषामा बैद्य जडशुत्रबादी हुन भने प्रचण्ड–बाबुरामहरु दलाल र धोकेवाज हुन भने त्यसको सजाय आम नागरिकलाई किन ?
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सेना समायोजनको प्रकृयामा बैद्य ‘बा’ र तपाईहरुको असन्तुष्टी थियो, त्यहि असन्तुष्टीले बैद्य माओवादीको जन्म भयो, त्यसपछि पनि तपाई सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन आफनै समूह बनाएर हिँडनु भयो । यसमा जनताको गल्ती के देख्नु हुन्छ ? यसमा वडा कार्यालयको गल्ती के देख्नु हुन्छ ? यसमा सडकमा गुड्ने गाडीको के गल्ती देख्नु हुन्छ ? जवाफ छ तपाईसँग ?
कमरेड, मैले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर यो भनिरहेको छैन, तपाईले पहिला स्वीकारेका कुराहरु अहिले किन अस्वीकार्य भए भन्ने बारेमा सोच्न बाध्य भएको मात्रै हुँ । तपाईको भाषामा बैद्य जडशुत्रबादी हुन भने प्रचण्ड–बाबुरामहरु दलाल र धोकेवाज हुन भने त्यसको सजाय आम नागरिकलाई किन ? मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्छे फेरि सशस्त्र विद्रोह गर्छु भनेर भन्दै गर्दा ‘भाग’ खोज्न हो भनेर मैले बुझे भने के म गलत हुन्छु ?
कमरेड, अन्तमा बन्द हडतालबाट हामी अति नै आजीत भइसकेका छौँ । १० बर्षे सशस्त्र युद्धले राजनीतिक चेतनाको स्तर त बढाएको होला, त्यस बाहेक अरु विनास र क्षतिबाहेक केही भयो र मुलुकमा ? तपाईहरु पनि त सशस्त्र युद्धबाट सत्ता प्राप्ती सम्भव छैन भन्ने स्वीकार गरेरै संसद भवन छिर्नु भएको हो । अनि, अहिले यो नौटंकी किन गर्नुहुन्छ ? त्यसैले थप क्षती हुनुपूर्व नै वार्ता र सम्वादबाट सबै कुराको निकास निकाल्नुहोस । तपाई गलत बाटोबाट सहि बाटो आएर पनि फेरि गलत बाटोमै फर्किनुभएको छ, यसले न तपाईको हित हुन्छ न मुलुकको ।
–लेखक हाल जापानमा छन्